Buy Betadine Gargle & Mouth Wash Bundle (2 Boxes) 120 ml ( Gift - Mask ) Online in Myanmar | Spree.com.mm
Betadine Gargle & Mouth Wash Bundle (2 Boxes) 120 ml ( Gift - Mask )
Product details of Betadine Gargle and Mouth Wash 120 ml
• A pleasantly flavored solution containing Povidone-Iodine (PVP-I 1%)
• For the treatment of infected inflammatory conditions of the mouth and pharynx including stomatitis, gingivitis, aphthous ulcers, pharyngitis, tonsillitis and monilial infections and bad breath.
• Asaprophylactic during and after surgery e.g. After tonsillectomy and dental procedures.
• Routine use to promote oral hygiene.
• Tilt the head backwards 45degree, Gargle for 30 seconds and Spit out the solution.
• For Sore Throat and Oral Diseases, use 10-15ml undiluted for 30 seconds. Repeat every 3-4 hours.
• For Daily mouthwash, use: 5ml diluted with2parts of water.
Betadine gargle & mouthwash (120ml) မှာ povidone iodine 1% ပါဝင်တဲ့အတွက် လည်ချောင်းနာ အာသီးရောင်ခြင်းတို့ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေရုံသာ မက ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းထဲဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား နဲ့ မှိုတွေကိုသာမက ဗိုင်းရက်စ်မျိုးစုံ ကိုပါသုတ်သင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် ideal antiseptic တွေရဲ့မရှိမဖြစ်အစွမ်းတွေဖြစ်တဲ့
-ကိုယ်တွင်းဆဲလ်များကို မထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း တို့လဲ စုံလင်စွာရှိပါတယ်။
BETADINE® Gargle & Mouthwash (ဘီတာဒိုင်း ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်) ကို ခံတွင်းအတွင်းလွှာ ပိုးဝင် ရောင်ယမ်းခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ အပူကန်နာ၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်း များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အာသီးဖြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သွားနှုတ်ခြင်းကဲ့သို့ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီ၊ ပြုလုပ်နေစဉ်နှင့် ပြုလုပ်ပြီးပါကလည်း ခံတွင်းသန့်စင်ဆေးရည် အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Betadine Gargle and mouth wash က ခံတွင်းသန့်စင် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်ဖြစ်ပြီး ခံတွင်းမှာ 10-15 ml နီးပါးငုံကာပလုတ်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းကိုတိတိကျကျထိစေရန်‌ဦးခေါင်းကိုမော့ပြီး စက္ကန့်၃၀ကြာ ပလုတ်ကျင်းပေးရပါမယ်။ ပလုတ်ကျင်းပြီးပါက ပြန်ထွေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ကို ၃ကြိမ်မှ ၄ကြိမ်အသုံးပြုပေးရပါမယ်။
နေ့စဉ်ပလုတ်ကျင်း ဆေးရည် အဖြစ် အသုံးပြုလိုပါက Betadine Gargle 5ml 1 ဆ ရေ2ဆ ရောပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။